I-ultrasonic Process Optimization & Ukubonisana - Hielscher Ultrasound Technology
Iminyaka engaphezu kwengu-20 okuhlangenwe nakho ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic yenza uHelelscher uchwepheshe ohamba phambili ngezinqubo zezimboni ze-ultrasonic. Siqondisa amakhasimende ethu kusukela ekucabangeni kwabo kokuqala ngenqubo ngokusebenza kwenqubo kuze kube sezingeni lokugcina-ekukhiqizeni kwezohwebo – ukuthuthukisa isixazululo esiphelele senqubo ngayinye ye-ultrasonic. Ububanzi bomkhiqizo wethu obanzi wemishini ye-industrial ultrasonic esebenzayo futhi enokwethenjelwa kanye nemiklamo yethu eyenziwe ngezifiso ivumela uhlelo oluphelele lwenqubo ye-ultrasonic. Singumlingani wakho we-high intense industrial ultrasonication!
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kahle baneminyaka eminingi abanokuhlangenwe nakho kokucubungula nge-ultrasonic. Sisekela ngokusekela amakhasimende ethu emibonweni yokuqala nokuvivinywa kuze kufike ekufakweni kokugcina kwezimboni zezimboni zemifula emikhulu. Ngokubambisana okubambene nokuyimfihlo, i-Hielscher isiza amakhasimende ayo kusuka ekuhloleni okusemandleni ngokusebenzisa ukucubungula inqubo kuze kube sekugcineni nokuhlanganiswa kwesistimu yokugcina ye-ultrasonic.
Ukucubungula okuphezulu kwe-Power Power Ultrasonic
Intuthuko eyinkimbinkimbi yenqubo ye-ultrasonic ihlanganisa izinyathelo ezintathu ezinkulu:
1. Kungenzeka: Ingabe isebenza?
Uma ikhasimende lisondela kithi ngombono wakhe wenqubo, isinyathelo sokuqala ukuphenya uma i-ultrasound inikeza imiphumela efunayo. Ngakho-ke, ukuhlolwa kokuqala okusemandleni kungenziwa – ngokuvamile evumelwaneni ye-batch – kwi-laboratory encane / ebhentshini-phezulu. Ukuhlolwa okunjalo okusemandleni kulula ukwenza. Ulwazi oluqondile lunikezwe ngemifino encane ngezikhwepha ezihlukahlukene ze-ultrasound nokulungiselelwa. Imiphumela inikeza isibonakaliso esihle uma umgomo ohlosiwe ungafinyelelwa nge-sonication.
Isivivinyo esingahle sokwethenjelwa singenziwa kumakhasimende’ eceleni noma ku-Hielscher indawo yokucubungula i-ultrasonic. Xhumana nathi ngemibono yakho yokucubungula!
2. Ukuthuthukisa: Iyiphi indlela yokusetha inqubo ephumelelayo kakhulu?
Ngemuva kokuhlolwa okuphumelelayo kokusebenza, kuyathakazelisa ukuthi inqubo ye-ultrasonic izobiza kanjani esikalini sokwenza izimboni. Ama-ultrasonicators aphezulu e-Hielscher avumela ukuhlelwa kwenqubo kanye nokulingana okuphelele kwezinga le-ultrasonic ekukhiqizeni izitezi zezimboni. Wonke ama-bench-top devices ethu akhiwe ebangeni lezimboni: sonication encane emsebenzini onzima & Umsebenzi we-24/7, othembekile kakhulu futhi oqinile. Ezingeni eliphezulu le-bench, zonke izilinganiso ezibalulekile zokucubungula zingathonywa ekuhlosweni ukuze kutholakale uhlelo lokusetha inqubo ezuzisa kakhulu, ephumelelayo futhi ephumelelayo:
izinga eliphezulu le-ultrasound (amplitude, izinga lokugeleza)
inqubo enhle yokushisa
isethaphu ekahle (idlule noma i-recirculation eyodwa)
Ukuhlelwa okuhlelekile kungenziwa kumakhasimende’ eceleni noma ku-Hielscher indawo yokucubungula i-ultrasonic. Xhumana nathi mayelana nezinhloso zakho zenqubo!
Isethaphu ye-Ultrasonic ye-bench-top ngenqubo yokusebenza.
3. Isikali: Indlela yokucubungula ngezinga eligcwele lokukhiqiza ukuhweba?
Lapho inqubo ye-ultrasonic ihlelwe kahle, imingcele yenqubo ekahle ingalinganiswa ngokulinganayo kuze kube usayizi wokukhiqiza. Umthamo wenqubo ungabalwa ngokuqondile ngenxa yemiphumela etholakala ngesikhathi sokusebenza. Abasebenzi bakaHielscher bakusiza ukuba uhlanganise amadivaysi e-ultrasonic yezimboni zibe ngumkhakha wakho wokukhiqiza – kungaba ngokuklama imishini ye-ultrasonic yendawo entsha yokukhiqiza noma ngokufaka kabusha ama-ultrasonicators kwisitshalo esivele sisekhona.
Ububanzi bethu bomkhiqizo obanzi kanye nabanjiniyela bethu abanekhono bavumela i-adapttion efanele kakhulu kanye nemiphumela emihle. Ukufakwa, isevisi nokuqeqeshwa kungengxenye yemisebenzi yethu yomhlaba wonke etholakalayo etholakalayo.
I-Ultrasonic Process Consulting: I-Hielscher ikuqondisa kusuka ekufezeni nokwenza kahle ekukhiqizeni kwezebhizinisi!
imishini yezimboni ze-ultrasonic
Hielscher's Ama-ultrasonicators asezimboni zitholakala ngobukhulu obuhlukahlukene – ilungele imigomo yenqubo ngayinye. Uhla olubanzi lwezinsizakusebenza ze-ultrasonic (amasayizi ahlukile wokuhlola kanye nokubukeka isb ngokunyuka okuphezulu kakhulu, izingcindezi eziphakeme, amazinga okushisa aphakeme; izimpondo ze-booster; ukugeleza kwamaseli, njll.) Kuqeda i-assortment yokuqhutshwa kwezimboni kwe-ultrasonic. Izinqubo ezinkulu zingagcwaliseka kalula futhi zithembeke ngokusetha okukodwa kwe-ultrasonic okukwazi ukuvumelanisa nezimo ezithile zenqubo.
I-High Power Ultrasound System ye-2x60kW yezinhlelo zokusebenza ezinzima
Imishini ye-Hielscher's High Power Ultrasonic:
Ububanzi bomkhiqizo obanzi-we-shelf
ama-amplitudes aphezulu kufika ku-180μm nge-sonotrodes ejwayelekile (isicelo esiphezulu ngaphezulu)
Amazinga okushisa aphakeme kakhulu futhi aphansi kakhulu: kusuka ku-nitrogen oketshezi kuya ku-aluminium eluhlaza
iziphuzo eziphezulu ze-viscous nama-pastes – futhi iqukethe izingcezu ezinkulu
Amaprosesa a-ultrasonic aqinisekisiwe a-ATEX / FM avela eshalofini atholakalayo
ubuchwepheshe abaningi be-ultrasonic kanye nenqubo yamalungelo obunikazi
Khuluma nathi ngenqubo yakho! Sizojabula ukukusiza kusukela emibonweni yokuqala ekufezeni inqubo yokuhweba!
Isevisi, Ukugcinwa Nokuqeqeshwa
Ngisho noma i-ultrasonicators yethu kulula ukuyisebenzisa futhi idinga ukugcinwa okuncane kakhulu, i-Hielscher ihlale ikujabulela ukukusiza ngezinsizakalo ezengeziwe mayelana nesihloko sokucubungula kwe-ultrasonic!
48 kW Ultrasonic Processors
ukuhamba kwemifula ephezulu